पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान अजिंगरको छालाले बनेको चप्पल लगाउँछन् ? « Khabarhub
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान अजिंगरको छालाले बनेको चप्पल लगाउँछन् ?
काठमाडौं– पाकिस्तानको खैबर पख्तूनख्वा प्रान्तको राजधानी पेशावरमा इमरान खानको लागि चर्चित चप्पल बनाउने व्यक्ति नूरउद्दीन चाचा यसपटक उनका लागि सर्पको छालाबाट बनेको विशेष प्रकारको चप्पल बनाइरहेका छन् ।
यो चप्पल इमरान खानलाई यदको उपहारको रुपमा दिनका लागि तयार गरिँदैछ । नूरउद्दीन चाचाले बीबीसीसँग बताए अनुसार यो चप्पल इमरानका एक जना फ्यानले बनाउन लगाएका हुन् । ति फ्यान आफ्ना कप्तानलाई विशेष प्रकारको उपहार दिन चाहन्छन् । नोमान नामका यी व्यक्तिले यसका लागि अमेरिकाबाट सर्पको छाला पठाएका छन् ।
उनको इच्छा छ कि इमरानका लागि सर्पको छालले बनेको चप्पल तयार होस् ।
नूरउद्दीन चाचाले चप्पल तयार गर्न शुरु गरे । उनलाई आशा छ इद भन्दा पहिलो उनी यो चप्पल प्रधानमन्त्री इमरानलाई उपहारको रुपमा पेश गर्न सक्नेछन् ।
‘यो निकै आरामदायी चप्पल हुने छ जसले इमरानलाई गर्मी हुनेछैन । यो चप्पल लगाएर उनी जति काम गरेपनि थाक्ने छैनन् । मलाई आशा छ हाम्रा कप्तानको लागि यो चप्पल निकै मन पर्ने छ ।’
नूरउद्दीन चाचाका ठूला छोला सलामउद्दीनले बीबीसीलाई बताए अनुसार यसपटक उनीहरु जुन चप्पल बनाइरहेका छन् यसलाई विषेश रुपमा तयार गरिँदैछ ।
सलामउद्दीनका अनुसार यो चप्पल बनाउनका लागि चार फिट सर्पको छालाको प्रयोग गरिनेछ ।
यो चप्पल बनाउन कम्तिमा पनि चालिस हजार पाकिस्तानी रुपैयाँ लाग्नेछ । उनका अनुसार यसअघि पाकिस्तानमा सर्पको छालाबाट चप्पल बनाइएको थिएन । हातले बनाउने भएका कारण यो चप्पल बनाउन लामो समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
विश्वमा सर्पको छालाबाट विभिन्न बस्तु तयार गरिन्छ जसलाई शोखिन मानिसले प्रयोग गर्छन् ।
सर्पको होइन अजिंगरको छाला !
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अजिंगरको छालाबाट बनेको बस्तुको मूल्य हजारौं डलरमा हुने गरेको छ ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार यो चप्पल अजिंगरको छालाबाट बनाइँदैछ । किनकी सानो सर्पको छाला कुनै पनि काममा प्रयोग गर्न सकिँदैन । यसकारण ठूलो सर्पको छालाको प्रयोग गरिन्छ जसमा अजिंगर पनि सहभागी हुन्छ ।
यूनिभर्सिटी अफ बाग, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको पशु विशेषज्ञ प्राध्यापकले सर्पको छालाको तस्वीर देखेपछि यो अजिंगरको छाला भएको दाबी गरे ।
उनका अनुसार पाकिस्तानमा अजिंगर लगभग लोप भएको छ । पाकिस्तानमा यस समय कश्मीरको भम्बर जिल्लामा मात्र अजिंगर पाइन्छ ।
प्रकाशित मिति : २० जेठ २०७६, सोमबार ८ : १३ बजे